Ptfe mpempe akwụkwọ Factory - China PTFE mpempe akwụkwọ Manufacturers, Suppliers
Skived PTFE Ibé akwụkwọ .001 "ka .250" Oké
Skived PTFE Nkiri Ibé akwụkwọ na-arụpụtara si na-amaghị nwoke PTFE resins nke na-akpụzi, sintered, na skived na kwesịrị ekwesị ọkpụrụkpụ. Ma PTFE Ibé akwụkwọ na ihe nkiri na-n'ọtụtụ ebe na a ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ruru ihe onwunwe pụtara ìhè e ji mara, gụnyere okpomọkụ na chemical-eguzogide, dielectric ike na mgbochi osisi Njirimara. A na-etinyekwa mpempe akwụkwọ na ihe nkiri ahụ n'otu akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ abụọ maka njikọta. Skived PTFE Film Ibé akwụkwọ dị na ọkpụrụkpụ sitere na site 0 ....
PTFE Mpempe 25mm Oké
PTFE, bụ soft fluoropolymer n'ibu plastic na ahụkebe iguzogide elu okpomọkụ, Chemicals, corrosion na nchegbu cracking. PTFE na-egosipụta oke okpomọkụ, ịdị ike igwe, ọkụ eletriki na obere esemokwu, na-eme ka ọ bụrụ ihe nhọrọ maka ọtụtụ nnukwu ọkụ na ngwa ngwa esemokwu. PTFE plastic dị na FDA kwadoro, eletriki, igwe, iko jupụtara ma na-ebu akara. Nkọwa: 100% PTFE PureE Sheet Agba: White Temp. Nso: -350 ka 50 ...
PTFE Polymer Film mpempe akwụkwọ efere ọkpụrụkpụ 5mm
PTFE, bụ soft fluoropolymer n'ibu plastic na ahụkebe iguzogide elu okpomọkụ, Chemicals, corrosion na nchegbu cracking. PTFE na-egosipụta oke okpomọkụ, ịdị ike igwe, ọkụ eletriki na obere esemokwu, na-eme ka ọ bụrụ ihe nhọrọ maka ọtụtụ nnukwu ọkụ na ngwa ngwa esemokwu. PTFE plastic dị na FDA kwadoro, eletriki, igwe, iko jupụtara ma na-ebu akara. Nkọwapụta: * Ọnọdụ ọnọdụ: Ọhụrụ * Dimension: 150mm * 150mm * 5mm ma ọ bụ omenala ...
PTFE Film mpempe akwụkwọ efere ọkpụrụkpụ 0.5mm
PTFE Film mpempe akwụkwọ na-arụpụtara site kwụsịtụ PTFE resin mgbe ịkpụzi. O nwere ikike kachasị mma iji gbochie mmebi kemịkal, na ịka nká, enwere ike iji ya n'okpuru -180C ~ + 260C na-enweghị ibu, yana ọ nwere ọnụ ọgụgụ akụkọ ifo kachasị dị ala n'ihe ama ama. Nkọwa: Aha aha: PTFE Sheet Main Color: White Material: PTFE Sheet Size: 500 x 500 x 0.5mm / 19.7 ″ x 19.7 ″ x 0.02 ″ (L * W * T) ma ọ bụ omenala. Nkọwapụta: 1.PTFE nwere ike iji mkpakọ ịkpụzi ma ọ bụ extrusion ...